MediaLight vs.Lumadoodle: Misiyano yakakosha - MediaLight Bias Lighting
MediaLight vs.Lumadoodle: Misiyano yakakosha
Ini ndangowana yako webhusaiti. Ndiri kuuya kubva kuLumadoodle iyo yandakakuvadza pandakaenda kuimba itsva. Pane chikonzero nei marambi ako achidhura zvakanyanya? Kunge iwe unogona kundiratidza chaiyo data?
Kutenda neshoko rako uye ndokumbirawo uregerere mhinduro yakanonoka. Tinowana iwo mubvunzo zvakanyanya. Ini ndinowanzo pindura nemubvunzo wangu ndeangu:
Iwe uri kuchengetedza mari here kana iwe ukatenga chigadzirwa chisingaite zvazvinofanirwa kuita?
Isu tinogadzira mwenje wakaderera-mutengo unodhura zvakada kufanana neLumadoodle, nepo ichipa hunyanzvi-chikamu chechokwadi, garandi yakareba uye zvimwe zvingabatanidza sarudzo.
Nekudaro, kana iwe uri kutsvaga kuti uite fananidzo yakakodzera, ndinogona kuenzanisa Lumadoodle neyechitsva LX1 kusasarura Chiedza kubva kuchikwata chimwechete cheMediaLight.
Pane zvimwe zvakawanda pakugadzira chiedza chakasarudzika pane kutora yakaderera-CRI (chete 75 Ra) inodzika tambo ye LED, "kubvisa chubhu repurasitiki uye kuisa chinamirwa kumusana," saLumadoodle inoda kuti iwe utende.
Kana iwe usiri kuda kukanganisa zvakashata mufananidzo weTV, saka pane zviyero zveCRI (Ruvara Rwekupa Index), chromaticity uye inotaridzika simba kugoverwa kwechiedza chemwenje icho chinofanira kuteverwa.
Kambani yedu yapedza makore manomwe ichivandudza kurongeka uye maficha ezvigadzirwa zvedu nepo zvavo zvisati zvave nani zvachose, uye tinoziva kuti kuchine nzvimbo yekuvandudza, ndosaka tichigara tichishanda pane inotevera iteration. Ichi chikonzero nei zvigadzirwa zveMediaLight zvinoshandiswa nevashandi vevhidhiyo panenge pese situdiyo uye posvo yekugadzira nzvimbo.
Izvo zvinopera pasina kutaura, asi isu hatisi zvachose chakabatana neLumadoodle, Govee, Antec, Zabiki kana chero mumwe munhu .. Zvisinei, izvo zvinotevera zvinodzivisa mafungiro uye zvinotarisa pane data re spectrophotometric uye dhizaini yemuviri.
Asi, dzokera kumubvunzo wako. Ini ndaida kukwanisa kutumira mhinduro yakazara ne chaiyeiye data, saka ini ndangoraira nyowani yeLumadoodle unit uye ndokuyera pasi peSekonic C7000.
Kutanga, ngatitorei mitsetse kubva mumapakeji avo uye titarise kuLumadoodle padyo neMediaLight. Chinhu chekutanga chauchacherekedza ndechekuti MediaLight ine akawanda maLED. Iyo 5m Lumadoodle strip ine 90 maLEM. A MediaLight yehurefu hwakaenzana ine 150 maLED. Kune ma66.66% mamwe maLED pane iyo MediaLight pamamita.
Kuenzanisa Lumadoodle uye MediaLight
Iwo machipisi muMediaLight angadhura 66% yakawanda zvichibva pahuwandu hweLED chete kunyangwe iri yakaderera-goho, yepamusoro chaiyo SMD machipisi haina kuda mari yakawanda kugadzira. Chokwadi ndechekuti, ivo vanobhadhara dai wango Kakapetwa ka20 pane LED.
Kuenzanisa kusarura chiedza che LED
Kutanga, regai ndingo taura kuti ichi hachisi kuenzanisa kwemaapuro-nema-maapuro.
MediaLight yakagadzirirwa nekufungidzira sainzi nyanzvi uye Lumadoodle haisi. MediaLight ine tsika yeColorgrade Mk2 machipisi uye Lumadoodle haina. Izvo hazvisi zvekugogodza vanhu vanoshanda ipapo, sezvo vari vanhu vakanaka kwazvo, ivo havangotarise mhando yemufananidzo kana vachivaka zvigadzirwa zvavo uye vakatendeseka kwazvo nezvazvo. Isu tinosarudza izvi kumakambani ari kutengesawo zvakaderera-mwero maOD asi vachizviti akarurama.
Ndakaedza Lumadoodle makore mashoma apfuura uye ndakafungidzira, sekune kwakawanda tekinoroji, kuti paizove nekuvandudzwa kwekuwedzera kubva ipapo. Muchokwadi, iyo CRI (color rendering index) ichiri yakaderera zvakanyanya kunyangwe LED tekinoroji yakafambira mberi zvakanyanya pamakore mashanu apfuura.
Lumadoodle Ruvara Rendering Index (CRI) = 76.3 Ra (kusakwana)
MediaLight Ruvara Rwekupa Index (CRI) ≥ 98 Ra
Kusiyana neizvi, yekutanga (post-beta bvunzo) MediaLight yakatengeswa muna2015 yakaratidza CRI ye91 (ikozvino 98-99 Ra). Asi, kunyangwe iyo MediaLight ya2015 yaive neCRI yakakwirira kwazvo kupfuura iyo Lumadoodle yanhasi.
Mutsetse mutsva wakayera kudziya kupfuura wepamberi mutsara, iyo yauchiri kuona matanho angu pano kubva ku2017, asi zvakadaro zvine musoro padhuze neyavo yakashambadzirwa CCT ye6000K (maringe neiyo 6500K mareferenzi standard).
Ndiri kurevei zvine musoro pedyo?
Nyika yekuvhenekera mwenje ndiWest West. Iko kune akaomesesa maindasitiri zviyero, asi vashoma vanoita sevanoitevera.
Isu tinotumira zvigadzirwa zvedu kune yakazvimiririra chitupa neISF, nepo makambani mazhinji achingodhinda "6500K" papakeji, kana "yakachena chena", kana "chokwadi chena." Ndakambotenga imwe yekuyedza yaiti "kufara kuchena" papakeji. 😁
Vaviri vevatadzi vakaipisisa, kunyangwe vaive Vansky naAntec. Vakanga vakaipa zvakanyanya zvekuti ivo vakakuvara chaizvo kuzvishandisa. Kana iwe wakambofamba mune stairwell kana yekupaka dhiza ine crappy, yakaoma magetsi, unoziva zvandiri kureva.
Vansky Bias Mwenje yaiti tembiricha tembiricha ye6500K pawebhusaiti yavo asi kuyerwa painosvika zviuru makumi maviri
Antec Kusarura Chiedza vakati mwenje yavo "yakanyatsoyerwa kusvika pa6500K" pawebhusaiti yavo asi ivo kuyerwa pa54,000K. Kwete kuenda kuSugarcoat iyo, zvaityisa.
Kutenderedza iyi sumo, Zabiki uye Halo Bias Chiedza vaive zvakare vakagumbuka pachavo, asi, nerombo rakanaka, vakatobuda mubhizinesi, saka handifanirwe kuzovaongororazve.
Nekudaro, mhinduro pfupi ndeyekuti zvinoda mari yakawanda kuvaka MediaLight nekuda kwekunge paine akawanda maLED, ayo ari iwo emhando yepamusoro - akavakirwa kuomesa "mareferenzi zviyero," pamwe neboka rezvimwe zvinhu zvaunofanira kugadzira LED bvisa yakazara-inoshanda kutsvetera mwenje:
CRI ye -98 pachinzvimbo che76 (mwenje yekusarudzika inofanirwa kuve yakaderera pa90)
Tighter binning kushivirira (mukati me50K ye6500K)
Kwakachena mhangura pcb kuvaka
Mazhinji ekuwedzera aungade kutenga zvakasiyana nemamwe magetsi (Ie nokuda kwenhamo uye Kure, Adapter, on / off toggle, yekuwedzera tambo, waya yekufambisa zvikamu).
Ndakataura here ma66.66% mamwe maOD pamubhedha?
I vimbiso kuti ini ndave kuzopinda mune yakasvibirira photometric dhata munguva pfupi. Asi ndisati ndaita, pane, chimwe chikamu chinovhiringidza chekumaka kweLumadoodle chinokonzeresa nyonganiso, uye izvo zvinoguma nemaemail mazhinji uye nhaurwa dzewebhu kwandiri.
Ini handina kuyedza iyo Lumadoodle Pro nekuti kana vachifara kutsikisa imwe spec yakatonyanya kupfuura mwenje wavo chena, izvo zvakandikwanira. Zvisinei, kana iwe ukadzidza chinhu chimwe chete kubva kuemail iyi: "mavara anoshandura mwenje nekusarongeka kwemavara hazvibatanidze.
Zvese MediaLight zvipenga zvakafananidzwa D65 chena. Hazvichinje mavara.
Naizvozvo, kuenzanisa kwedu kuri pakati peMediaLight Mk2 nechena Lumadoodle.
Heino yakajeka data mu .csv fomati yezviyero kubva pamicheka miviri yakajeka yakatorwa neSekonic C7000 kubva pa18% grey kadhi mune imwe kamuri yakapendwa nependi yaMunsell N8. (Iwe unogona kunge wakaona yedu inosanganisa nharaunda pane mamwe mapeji. Isu tinoshandisa izvo kuyedza munhu akazvimirira maOD, mababu uye misoro yemarambi, kwete akaunganidzwa mitsetse).
Izvo zviyero zviri pamusoro zvakatorwa ne1m kureba kwetambo dzeUS.
Kuenzanisa MediaLight uye Lumadoodle Zvimiro
MediaLight inosanganisira dimmer. Lumadoodle haisanganisi dimmer yeiyo chena modhi (kutsvetera mwenje kunofanirwa kuve D65 chena, saka izvi ndizvo zvatiri kuenzanisa), asi iwe unogona kutenga imwe yeinosvika $ 12
MediaLight inosanganisira on / off switch. Lumadoodle haina. Kana chiteshi che USB paTV yako chikasadzima neTV, iwe unorairwa kuti ubudise.
MediaLight's dimmer uye kure inoshanda neHarmony kure kana IR zvakasarudzika remotes, Lumadoodle haisanganisi dimmer uye iyo unit inowanikwa yekutengesa haisi Harmony kana IR universal kure inoenderana.
MediaLight inoshandisa yakachena mhangura pcb (alloy-yakanyudzwa) yepamusoro conductivity uye kupisa sink kugona, Lumadoodle haina.
MediaLight inosanganisira adapta (North America chete), Lumadoodle haina.
MediaLight inosanganisira 5 Year Warranty, uye iyo Lumadoodle garandi igore rimwe.
MediaLight haichinje mavara uye Lumadoodle inogadzira modhi ine mavara akasiyana. Kana iwe uchida kuchinja mavara, Lumadoodle isarudzo iri nani. Nekudaro, marara anochinja mwenje zvinokanganisa chifananidzo pachiratidziro chemavara-akakosha kuona. Nekuda kweizvozvo, MediaLight haivape.
MediaLight inosimbiswa kunyatsoita neImaging Science Foundation uye yakagadzirirwa kupfuudza SMPTE zviyero zvechiedza chakajeka chemavara akaomesesa mamiriro enzvimbo. Lumadoodle iri padyo zvine musoro kwavari akataura zvinangwa ye6000K uye 76 Ra, asi izvi hazvisi mareferenzi zviyero.
MediaLight maLED akafananidzwa D65 (6500K ine Δuv ye .003 - iyo Ofuv yezuva rakagadzirwazve, zvinoenderana neCIE yakajairika inovhenekera D65) ine Ultra-yakakwira ruvara kupa index (CRI) ye ≥ 98 Ra. Iwo maratidziro echromaticity ari padhuze padyo neiyo x = 0.3127, y = 0.329 yakajairwa.
Lumadoodle inoshambadzira inoshambadza tembiricha yakaderera ye6000K (pane mamwe mapeji) uye zviyero zvedu zvinoburitsa izvi kunze. Ivo anodziya kupfuura 6500K (anenge 5600K yemuenzaniso uyu). Lumadoodle's color inopa indekisi ye76 iri pazasi peiyo SMPTE-yakakurudzirwa kukosha kushoma kwe90 Ra.
Chaizvoizvo kutaura, mwenje wepamusoro weCRI wakarurama kupfuura mwenje wepasi weCRI, uye 76 iri pazasi pechikumbaridzo cheiyo chaiyo yekubereka mifananidzo.
MediaLight ine R9 (yakadzika tsvuku) kukosha kwe ≥ 97. Lumadoodle ine yakashata R9 kukosha. Izvi zvinoreva kuti Lumadoodle haina yakadzika yakatsvuka mune yayo spectrum, zvirinani haina kuenderana nemamwe mavara mune iyo spectrum.
Ruvara rwakatsvuka (R9) rwakakosha kumatoni echokwadi eganda nekuda kweropa kuyerera pasi peganda redu. (Izvi zvine basa kunyangwe nekuratidzira kwekuratidzira, kunyangwe hazvo kukanganisa kuchinjika). Iyo zvakare inotsanangura kuti nei mwenje inowanzo kuve neyegirini / bhuruu cast inofananidzwa neakakwira CRI mwenje. Chiedza chine bhuruu uye yero yepamusoro.
Spectral Simba Kugovera uye CRI yeMediaLight Mk2
Spectral Simba Kugovera uye CRI yeLumadoodle
Zvinogona kuve zvinonetsa kuona musiyano uripo pakati pekupararira kwesimba kwenzvimbo mbiri dzemwenje, saka tichazadza magirafu. Kugoverwa kwesimba kwesimba kweLumadoodle kunoiswa pamberi peMediaLight Mk2. Iyo Lumadoodle inoita kunge inopenya chena ine muganho mutema uye MediaLight Mk2 inoonekwa muvara.
Isu tinoona kuti Lumadoodle inogadzira chena nekubatanidza yero phosphors (phosphors ine yepamusoro wavelength ye580 nm) ine bhuruu emitter. Iko hakuna tsvuku kana girini yepamusoro muLumadoodle sampuro (unogona kuita yakaderera CRI mwenje mwenje nekubatanidza maviri mavara echiedza - yero nebhuruu).
Iwe unogona kuona yakaparadzaniswa yakasvibira uye tsvuku misoro yeMediaLight Mk2 uye iwo mavara anotaridzika kushinga pane girafu anomiririra iwo mavara asipo kubva kuLumadoodle spectrum. Iyo chena "pamusoro pegomo" inomiririra iyo yepamusoro simba renzvimbo yeyero phosphors muLumadoodle.
Iyo MediaLight haina yero yero yepamusoro seyakabatanidzwa yehupamhi uye yakatetepa-bhendi tsvuku uye girini phosphors inosanganiswa neyeblue emitter kupa iyo MediaLight Mk2 SPD chimiro chiri padyo neD65, kana "yakateedzerwa D65."
Nepo kuenzanisa uku kuri kuuya kubva kumukwikwidzi wavo, kusiyana nezvimwe zvigadzirwa pamusika, Lumadoodle haitaure kuti yakagadzirirwa kutendeseka, uye mutengo wacho wakaderera pane mutengo weMediaLight, kunyangwe zvisiri hazvo kuderera pane zvakafanana zvigadzirwa zveUS. Enzanisa izvi nemakambani anovimbisa kupfuura zvaanounza. Ivo vari kuvimbisa CRI ye76 uye ndizvo zvaunowana.
Mutengo zvirokwazvo chinhu uye kunyangwe iwo mwenje wakasarudzika haugone kuchengetedza TV yakaipa ine marongero asiri iwo.
Tinosarudza kusatengesa kune vanhu vasingade kana kuda kunyatso. Kune vamwe vanhu vazhinji vanoshandisa maTV zvakananga kunze kwebhokisi pane kune vanhu vanoenzanisa zviono zvavo.
Isu tinovimba, zvakadaro, kuti isu takaratidza kuti nei zvigadzirwa zvedu zvichidhura zvakanyanya kugadzira kuti iwe ugone kusarudza kuti ndechipi chigadzirwa chakakukodzera.
Heano mavambo eLumadoodle vachitaura nezve kwavo kusarudzika zvigadzirwa zvemwenje uye nemabatiro avanosiyana nawo. Izvi hazvishamise. Mazhinji maLED anotengeswa semwenje wekusarura ndiwo zvigadzirwa zveUSB zvakagadzirirwa zvinangwa zvakasiyana, senge mwenje wematende.
Mwenje yedu yaizoita mwenje unotyisa wetende, asi iwo mwenje wakasarudzika. Nekudaro, pane mamiriro ezvinhu apo kurongeka hakuna basa zvakanyanya, uye kubhadhara iko kukodzera hakuna kukodzera iyo yekuwedzera mutengo. Iwe haufanire kutenga chinhu chinodhura kupfuura zvaunoda kubhadhara kune izvo zvinhu zvausingade.
Kana iwe ukaenzanisa TV yako, mwenje isiriyo inobudirira kuibvisa pamaonero evaoni. Misiyano inonzwisisika pakati pekuchromaticity uye kupa kweruvara kweMediaLight neLumadoodle, kazhinji, kwakanyanyisa kupfuura ma tweaks aunoita pakuratidzira kwako, uye sezvo mwenje ichipa chiratidzo chechena chena, inoonekwa shanduko mu tembiricha yemuvara. uye tint inoenderana nemusiyano iwoyo.
Kana iyo ambient mwenje munzvimbo yekutarisa iri kudziya uye iine uv iyo yakanyanyisa kukwirira, ichaita seyakajeka uye ichidziya kupfuura yakayerwa D65 mwenje. Nekuda kweizvozvo, TV inozotaridza yakawanda magenta uye inotonhorera kupfuura D65, kunyangwe kana yakaverengerwa.
Uye kunyangwe pasina musiyano wechokwadi, pane zvimwe zvinhu zvaungade kuwedzera kuLumadoodle kuti zviite maapuro-ku-maapuro kuenzanisa zvichibva pamutengo, Izvi zvinhu zvinosanganisira kure kure, dimmer (mabhanhire ekurerekera anofanirwa gadzirirwa ku10% yeiyo yakajeka kupenya kwechiratidziro, saka iwe unoda dimmer) AC adapter, tambo yekuwedzera, yakakwira mwero we LED uye yakanyanya kureba warandi nguva. Kuwedzera zvishandiso kunovhara mutengo wemutengo zvakanyanya.
Iko kiyi yekutengeserana-ndeimwe yemutengo maringe nekururamisa Kana iwe ukasawana iko iko iko kwechokwadi kwaunoda, iwe unogona kunge uchibhadhara zvakanyanya, kunyangwe nemutengo wakaderera. Uye, kana iwe usingade kunyatsoita, unogona kuve zvirinani nechigadzirwa chakachipa, pane chimwe chezvinhu zvakaongororwa papeji ino.
Uku kwaive kuenzanisa kunonakidza. Ndeapi magetsi aungade kuona kuyerwa zvinotevera?